Nuxurka Khudbadii Xasaasiga aheed ee Madaxweynaha ka jeediyay Caleemo saarkii A/Madoobe |
Nuxurka Khudbadii Xasaasiga aheed ee Madaxweynaha ka jeediyay Caleemo saarkii A/Madoobe
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qeybgaley munaasabada caleema saarka Madaxweynaha Maamulka KMG ee Jubba oo ka dhacdey magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
“Dagaalkii sokeeye iyo fowdada way ka dhammaadeen Soomaaliya. Kala aragti duwanaansho kasta oo dhacda waxaa lagu xalin karaa wadahadal, waana mahad Ilaahay inaan ka soo gudubney waqtigii xoogga iyo colaadda wax lagu raadin jirey, Waxaan ku jirnaa marxalad siyaasadeed iyo dowlad dhisid.
Marxaladda noocaasi ahna waxaa barbar socota cabasho, tabasho, cabsi iyo is riix riix siyaasadeed. Waa inaan naceybka iyo colaadda ku bedelnaa in nabad la dhaliyo, is jaceylna la dhex dhigo bulshada’’.
“Khibrad badan ayaa laga bartaa khaladaadkii hore u dhacay. Shacabka uma baahna in dhegahooda lagu shubo naceyb iyo cabsi. Haddii ay jiraan kala aragti duwanaansho u dhexeysa madaxda waa in lagu xaliyaa goobaha loogu talagaley, Sax ma ahan in goob fagaare ah amaba warbaahinta la soo dhex dhigo hadalo dadka kicin kara, kuna celin kara rajo beel iyo colaad hor leh oo aan loo baahneyn’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dib u heshiisiinta ay sii socon doonto, loona baahan yahay in dowladnimada sii xoogeysaneysa la aamino si horey loogu sii dhaqaaqo,
“Shisheeye nooma sameyn karto siyaasadda aan dalkeena ku hageyno, Beesha caalamka taageero badan ayay ina siisey”.
Waddamada deriska iyo Afrika inteeda kale waxay nagu deeqeen wiilashooda iyo gabdhahooda si ay dib u soo celinta nabadda inoo gala shaqeeyaan,waana ka mahad celineynaa. Haddaan nahay madaxdii qaranka, waxaa na soo doortey shacabka, waxaana na laga doonayaa inaan si hufan ugu adeegno, isla markaana aan dejino qorshe siyaasadeedkii waddankan lagu hagi lahaa inagoo shacabka kaashaneyna’’.